Chii chinamato uye kufungisisa - Afrikhepri Fondation
Kupindirana uye munyengetero
Chii chinonzi munyengetero uye kufungisisa
Verenga: 9 min
L 'Chishuvo chinoratidzwa mumunamato, haisi iyo nzira kuna Mwari here? Ngatitarise nyaya dzakasiyana mumubvunzo uyu. Vanonyanya kufunga nezvekunamata, kufungisisa nekufungisisa.
Nemamwe mazwi, tinoda kuvhiringidzika kwedu, kutambudzika kwedu, kukakavadzana kwedu, kurongedzwa nemumwe kune isu, tinotendeukira kumumwe munhu kuti atiunze chiedza uye mufaro.
Ichokwadi chinofanira kuuya kwauri, haugone kuenda kwairi.
Pano pane chimwe chinhu chiri mubvunzo uyu, iyo mhinduro yezvatinoshevedza izwi remukati.
Uye mune dambudziko iri kunewo iyo yekufungidzirwa. Kune vazhinji vedu, kukanganisa inzira yekuregererwa, iyo inoshandiswa kushanda nesimba, chisungo, kutungamirirwa, kutevedzera.
Izvi zvinoshandiswa, iwe unonzi iyo kufungisisa.
Asi izvi hazvisi kufungisisa.
Kufungisisa kwechokwadi hakusi kurega kubvisa kana kubvisa pfungwa, kana kuvakira kusagadzikana kwemashoko asina kunaka. Munyengetero, kwete kupfuura kungofungisisa, ndeyekufungisisa kwechokwadi.
Kufunga kwepfungwa hakusi kufungisisa, nokuti zviri nyore kuisa pfungwa pane imwe nyaya inofadza. Mutungamiri mukuru anogadziriswa muurongwa hwehondo uyo achatumira mauto ake kudura rebencher rinowedzera.
Iwe haufaniri kubvuma zvandinotaura, asi kana ukatarisa munyengetero uye kufunga kwepfungwa zvakanyatsonaka, iwe uchaona kuti hapana kana mumwe wavo anotungamirira kunzwisisa, asi Kufungisisa kunosanganisira kunzwisisa kunounza rusununguko, kujekesa, kubatana.
Chero kana zviitiko izvi zvose zvave zvichifungidzirwa uye zvinonzwisiswa, apo pfungwa yose inodonhedzwa, apo hapasisina ronda rimwe chete, pamwe chete nekuyeuka kumwe chete kuisa karo, kuti yekusingaperi inogona kuti agamuchirwe.
Zvadaro iwe uchakwanisa kutevera, pasina chivimbo kana kururamiswa, kushandiswa kwose kwepfungwa yako uye manzwiro uye kana pavanomuka, iwe uchaita kuti huve hukama hunozosimbiswa, huchazogadziriswa asi huchauya kubva pane zvauri hazvizove nematambudziko, hapana kupesana.
Zvakafanana nedziva rinodzikama uye runyararo husiku humwe kana pasina mhepo. Apo pfungwa iyo yakanyarara, chii chisingaverengeki chinovapo.
Kufunga Vipassana Kufungisisa: Basic Buddhist Kuchenjera Kuita Muitiro
2 nyowani kubva ku € 4,20
Tenga € 4,20
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Gumiguru 24, 2020 9:16 PM
Ramangwana Rehupenyu Panyika - Hubert Reeves (Vhidhiyo)
Maitiro ekugadzirira Saka Saka?
Bhuku reEgypt yevakafa kana tsika yekubuda kwemasikati
Ama Mazama, nyanzvi mumitauro, machechi eAfrica uye munyori wenhoroondo
Kubudirira hakumiriri. Kubasa - Napoleon Hill (Audio)